Kambani - FroggyAds Online Kushambadzira Network
FroggyAds Mambo weTraffic
Isu tiri timu (Vakatanga vari Kushambadzira uye Ad tech veterans). Ivo vanoziva izvo zvakakosha uye izvo zvinotora. Chikwata chedu chakapedzwa nevakawanda vane tsika dzakasiyana vechidiki uye vakapedza kudzidza. Vanounza kumhanya, kuda kuziva, uye nekuramba vachipokana kambani mune zvazvinoita. Saka isu tinoramba tichimhanya chaizvo mukuchinjika kune yedu yekukurumidza ichichinja nharaunda Isu tiri timu (Vakatanga vari Kushambadzira uye Ad tech veterans). Ivo vanoziva izvo zvakakosha uye izvo zvinotora. Chikwata chedu chakapedzwa nevakawanda vane tsika dzakasiyana vechidiki uye vakapedza kudzidza. Vanounza kumhanya, kuda kuziva, uye nekuramba vachipokana kambani mune zvazvinoita. Saka isu tinoramba tichimhanya chaizvo mukugadzirisa kune yedu inokurumidza kuchinja nharaunda.
FroggyAds.com ndeye yese-mu-imwe Media Inotenga Ad Serving chikuva iyo inopa zvese Ad Serving, vashambadziri, uye vanobatana vanofanirwa kumhanyisa rakabudirira dhijitari kushambadzira bhizinesi. FroggyAds.com ndeimwe yeakanakisa matekinoroji anobatanidza otomatiki kutenga danho uye chaiyo kutonga. Kuve rinotungamira kushambadzira kuronga nyanzvi nyanzvi, isu tinobatsira vatengi vedu mukuwana hunoshamisa hunoshamisa kune avo vemberi midhiya zviwanikwa Nekubatsira kwayo kushambadza kwakanyatso shongedzwa uye kwakasarudzika kunogona kuendeswa kune yakasarudzika ezvikwiriso uye zvigadzirwa. Kuva sangano rehunyanzvi isu tinosangana nezvinodiwa uye zvinodikanwa nevatengi vedu boka redu rinogara richirwira kukwana, kubwinya uye zvinowedzeredzwa. Iko kubudirira kwevatengi vedu kunotyaira bhizinesi redu. Tichigara tichifunga mugumo chinangwa chekuwana mibairo mikuru yekushambadzira, isu tinopa vatengi vedu inyore uye inonzwisisika interface kuti vakwanise kumhanya, kuongorora uye kudzora kwavo mushandirapamwe munetiweki yedu.
Iyo FroggyAds.com Ad Serving chikuva chakavakirwa kusimbisa chengetedzo uye chinopa rako bhizinesi nzvimbo kuti ikure. Iko hakuna muganho kune huwandu hwevatengi iwe vaunogona kuwedzera kune iyo system, ichiita FroggyAds.com iri nyore uye inodhura sarudzo yekuwedzera yako kushambadzira bhizinesi. Sisitimu yedu inoshandisa chechitatu bato inopesana nehunyengeri uye nemasevhisi akachengeteka masevhisi ekuchengetedza vese vanobatirana muFroggyAds.com yakachengetedzwa, uye yedu itsva yekushambadzira midhiya uye traffic yemhando index inochengetedza vatengi vedu pamberi penzvimbo.
Tiri pano kuzokubatsira kuyera bhizinesi rako zviri nyore, uye kumhanyisa rako redhijitari kushambadzira zvinobudirira. FroggyAds.com yakatsaurirwa kupa yakachengeteka uye yakavimbika chikuva apo vashambadziri, vanobatana, uye Ad Serving vanogona kutenga nekutengesa traffic isina kunetsekana uye nyore.
FroggyAds.com yakagadzirwa nekambani yemubereki, Platform Inc.Platform yakaisa mari inodarika miriyoni yemadhora kubvira 2013 kugadzira chikuva chakabatana, chakajeka, uye chiri nyore kushandisa. FroggyAds.com yakagadzirirwa kupa zvese izvo Ad Serving ingangoda: chaiyo-nguva data, nyore kugadzirisa, mhando-yakarova traffic, uye tarisa sarudzo pane dzese dzinowanikwa, kuratidza, popups, nhare, vhidhiyo, uye mabhurawuza ewebhu. FroggyAds.com inowanikwa muAarhus, Denmark.
Tinoda kushanda nesimba kugadzirisa matambudziko. Isu tinoita chero chinotora kuti basa riitwe. Isu tinoziva kuti kambani yakangosimba sevanhu vanoshanda imomo, ndosaka tichigara tichitarisa kune vanonyanya kufarira vane moyo unoda kupa yavo zana%.
Isu tinoziva kuti kambani yakangosimba sevanhu vanoshanda imomo, ndosaka tichigara tichitarisa kune vanonyanya kufarira vane moyo unoda kupa yavo zana%.